လက်ပ်တော့အပေါ် WINDOSE RESET လုပ်နည်း - WINDOWS ကို - 2019
လက်ပ်တော့အပေါ်ကို Windows ကို reinstall
မကြာခဏအလုပ်က MS နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသုံးပြုသည်သူများသည်, သေချာများအတွက်အနည်းဆုံးသူတို့မကြာခဏရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိသည်အကြင်သူတို့အဘို့, ဤအစီအစဉ်၏အင်္ဂါရပ်များအများဆုံးသတိထားဖြစ်ပါတယ်။ ဤအမှု၌အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများသည်ကပင်သူ၏ဖြေရှင်းချက်သိသာပုံရသည်ပြဿနာများနှင့်အတူခက်ခဲနိုင်ပါတယ်, ပိုပြီးခက်ခဲကြောင်း, ။
ဒီရိုးရှင်းတဲ့, ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရည်ရွယ်ချက်များတစ်ခုမှာ - နှုတ်ကပတ်တော်၌မသန်စွမ်းပဲထားရန်လိုအပ်ကြောင်း။ ဒါဟာဒီလိုလုပ်ဖို့ကဤတူညီသောမသန်စွမ်းပဲကီးဘုတ်ပေါ်ခြယ်သကြောင်းအနည်းဆုံးအကြောင်းပြချက်များအတွက်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ကြောင်းကိုပုံရသည်။ [ ... ] ကစတုရန်းကွင်းခတ် - ရုရှား layout ကို၌သူတို့အပေါ်မှာကလစ်နှိပ်ခြင်း, သင်စာတစ်စောင်အင်္ဂလိပ်လို "X" ကို "Y", get ။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသင် curly မသန်စွမ်းပဲထားသလဲ? ဒါကကျနော်တို့ကိုဖော်ပြရန်ထားတဲ့အသီးအသီးအဘို့, နည်းလမ်းများစွာအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
အင်ျဂလိ layout ကိုမှ 1. Switch (CTRL + SHIFT သို့မဟုတ် ALT + SHIFT,) စနစ်အတွက် setting များပေါ် မူတည်. ။
သတ္တုအထိမ်းအချုပ်ဖွင့်လှစ် installed ရမည်ဖြစ်သည့်စာရွက်စာတမ်းအတွက် 2. ကိုနှိပ်ပါ။
3. စာနယ်ဇင်း "SHIFT + x ကို"ie"SHIFT"ထိုခလုတ်ကိုထားတဲ့အပေါ်ဖွင့်လှစ်သတ္တုအထိမ်းအချုပ် (ရုရှားအက္ခရာ"x က”).
5. နှိပ်ပါ "SHIFT + Z ကို” (SHIFT ကာခလုတ်ကိုထားတဲ့အပေါ်ပိတ်ပွဲ bracket က) ။
6. Lockable bracket ကဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်။
သင်သိသည့်အတိုင်းက MS နှုတ်ကပတ်တော်၌လည်းစာရွက်စာတမ်းသို့ထည့်သွင်းနိုင်သည့်သင်္ကေတများနှင့်ဆိုင်းဘုတ်များ၏ကြီးမားသောထားရှိပါတယ်။ ဤအပိုင်းကိုအတွင်းကိုယ်စားပြုဇာတ်ကောင်အများစုဟာ, သင်အတော်လေးယုတ္တိဖြစ်သော, သင့်ကီးဘုတ်ပေါ်မှာရှာတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဤပြတင်းပေါက်များနှင့်မသန်စွမ်းပဲရှိသည်။
သငျသညျတခုဖွင့်လှစ်သတ္တုအထိမ်းအချုပ် add, နှင့် tab ကိုသှားဖို့လိုတဲ့နေရာကို 1. ကိုနှိပ်ပြီး "ထည့်".
2. Menu ခလုတ်ကို Expand "သင်္ကေတ"အုပ်စုတစုထဲမှာတည်ရှိပြီး "သင်္ကေတ" နှင့်ကို select "အခြားဇာတ်ကောင်".
့ dropdown menu ကနေဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်ခုနှစ်တွင် 3. "Set" ကို select "အခြေခံလက်တင်" ဆင်း scroll အနည်းငယ်အိုင်ကွန်စာရင်းပေါ်လာမည်။
4. အဲဒီမှာတစ်ခုဖွင့်လှစ်သတ္တုအထိမ်းအချုပ် Locate ပေါ်မှာ click နှိပ်ခြင်းနှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ထည့်"အောက်ခြေတွင်။
5. ပေးတဲ့ dialog box ကိုပိတ်လိုက်ပါ။
အဲဒီမှာပိတ်သတ္တုအထိမ်းအချုပ်ဖြစ်နှင့်ပြန်လုပ်သင့်တယ်ရာအရပ်တွင် 6. နှိပ်ပါ 2-5 လုပ်ပါ။
သင်ခန်းစာ: တစ်ဦးကို tick ထည့်သွင်းဖို့နှုတ်ကပတ်တော်၌အဖြစ်
အထူးကုဒ်နှင့် hotkey အသုံးပြုခြင်း
သငျသညျဂရုတစိုက်စဉ်းစားပါလျှင်သမျှသော "သင်္ကေတ" လို့ပေးတဲ့ dialog ပြတင်းပေါက်၌တည်ရှိ၏နှင့်ဆက်ဆက်အပိုင်းသတိထားမိနိုင် "အက္ခရာကုဒ်"အဘယ်မှာသင့်လျော်သော icon ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းပြီးနောက်မျှသာနံပါတ်များ, ဒါမှမဟုတ်အရင်းအနှီးအက္ခရာများနှင့်အတူနံပါတ်များကိုပါဝင်သည်ဟုလေးဂဏန်းပေါင်းစပ်ပုံပေါ်ပါတယ်။
ဒီအကျင့်စရိုက်ကုဒ်, သူ့ကို သိ. , သင်ပိုမြန်မယ့်စာရွက်စာတမ်းသို့လိုအပ်သောကုဒ်ထည့်နိုင်သည်။ code ကို၏နိဒါန်းပြီးနောက်ကိုလည်းတပ်မက်လိုချင်သောအကျင့်စရိုက်သို့ကုဒ်ပြောင်းပေးမယ့်အထူး key combination ကိုနှိပ်သင့်ပါတယ်။
အဲဒီမှာတစ်ခုဖွင့်လှစ်သတ္တုအထိမ်းအချုပ်ဖြစ်သဖြင့်, code ကိုရိုက်ထည့်သင့်တယ်ရာအရပ်မှာ 1. ရာထူးညွှန်းမြား "007B" အဆိုပါကိုးကားခြင်းမရှိဘဲ။
ကောင်စီ: ကုဒ်အင်္ဂလိပ်ကီးဘုတ် layout ကိုရှိရမည်ရိုက်ထည့်ပါ။
ထိုခဏခြင်းတွင် code ကိုဝင်အပြီး 2, စာနယ်ဇင်း "ALT + X" ကို - ကဖွင့်လှစ်သတ္တုအထိမ်းအချုပ်သို့ကူးပြောင်းသည်။
ပိတ်ပွဲသတ္တုအထိမ်းအချုပ်မိတ်ဆက်ပေးရန်အလို့ငှာပြုလုပ်ကိုလည်းအင်္ဂလိပ်ကီးဘုတ် layout ကိုအတွက်သည်, ကိုးကားခြင်းမရှိဘဲ code ကို "007D" ဖြစ်သင့်ရာအရပ်တွင်အမျိုးအစား3။
4. နှိပ်ပါ "Alt + X ကို"ဟုအဆိုပါပိတ်ပွဲသတ္တုအထိမ်းအချုပ်ဝင် code ကိုပြောင်းပါ။
ဆိုလိုသည်မှာယခုသင်နှုတ်ကပတ်တော်၌ curly bracket ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်သမျှသောတည်ဆဲနည်းလမ်းများအကြောင်းကိုသိကပါပဲ။ အလားတူနည်းလမ်းများစွာသောအခြားသင်္ကေတများနှင့်ဆိုင်းဘုတ်များမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။